mitory an'i Kristy, Asehoy azy ireo Voninahitra — Trip LEE - OFISIALY SITE
mitory an'i Kristy, Asehoy azy ireo Voninahitra
Ity lahatsary sy ny sora-tanana avy Trip ny FIVORIANA HO AN'NY DAHOLOBE amin'ny Legacy Conference 2013.
Ny foto-kevitry ny ity fihaonambe ity dia Soli Deo Gloria, na ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Izany no foto-kevitra lehibe. Ary tiantsika ny fomba fijery - rehetra ny voninahitra ao amin'ny Izao Rehetra Izao an'Andriamanitra irery ihany, mba mampahafantatra rehetra na inona na inona ataontsika. Nandritra ny fotoana anio alina, Tiako ny mieritreritra ny fomba izay mampahafantatra ny fitoriana ny filazantsara.
Milaza ny olona momba an'i Jesoa dia toa ho iray amin'ireo zavatra rehetra amintsika no mahafantatra tokony hatao, nefa isika rehetra mahatsapa ny tsy manao meloka ampy. Tsara aho? Aho irery izany? Na dia vao tamin'ny herinandro lasa, Mahatsiaro ho voaheloka aho satria ny fifandraisana no nanomboka nanao ny trano iray ny mpiara-monina no karazana nanomboka latsaka eny. Efa tsy mba tahaka iniana araka izay tokony mikasika ny fananganana izany amin'ny fifandraisana, ary ny fanohizana ny miezaka mba hilaza aminy ny momba an'i Jesosy. Ary toa toy ny mahatsapa izany aho matetika. Ny fanontaniana tiako ny hanontany no antony? Inona no fomba fijery fo tokony raikitra? Mila ny saina mba ho havaozina. Tsy maintsy hahatsiaro ny antony manao izany aho.
Ary tsy misy isalasalana fa ny fitoriana ny filazantsara dia mampatahotra sy mafy sy saina. Ary izany indrindra no mandeha eo ao am-pontsika. Ahoana ny fomba hafa tsapanao momba izany? Miezaka ny handresy lahatra olona fa ry zareo mpanota mila ny Mpamonjy ary fa i Jesoa no hany fomba, toa toy ny heloka bevava ratsy indrindra eo amin'izao rehetra izao amin 'ny' handefitra "kolontsaina. Tena manafintohina.
Koa nahoana isika no tokony hitory ny Filazantsara? Tsy miloa-bava sy ny tsy misy olona te-hihaino izany. Ny olona mankahala antsika fa. Olona milaza izahay ambadiky ny fotoana. Olona milaza isika hifikitra antitra boky lany andro amin'ny hevitra lany andro. Isika dia miaina ao anatin'ny maizina, izao tontolo izao feno fankahalana. Koa nahoana? Moa ve isika fandaniam ny fotoana
Tsy fantatsika ny antony gotta manao izany isika, na izahay Ho kivy. Moa ve isika nitory ny Filazantsara mba hahafahantsika hanery ny olona rehetra mba ho tahaka anay? Moa ve noho ireo mpanao izahay izay mihevitra izahay rehetra tsara kokoa noho ny hafa? Moa ve isika rehetra satria mila karazana ny fanantenana mba hifikitra sy Jesosy hanao? No. Mitory ny Filazantsara isika, satria tiantsika ny olona hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ary hitantsika fa voninahitra amin 'ny Zanany.
Raha miala amin'ny zavatra iray loha aoka ho izay. Izahay kosa mitory an'i Kristy ny olona mba afaka mahita voninahitra.
Nahoana no zava-dehibe?
Mpifoka rongony mahazo avo satria tsy mahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra. Rappers ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tenany amin'ny sehatra amin'i Jesosy, satria tsy mahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra. Young dudes eo amin'ny fiaraha-monina ny tsirairay mitifitra, satria tsy mahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra. Tanora tovovavy mahafatifaty izy mametraka ny matoky ny fifandraisana satria tsy mahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra. Ketraka ny tanora mamono tena satria tsy manana fanantenana, satria tsy mahatakatra ny voninahitr'Andriamanitra. Ny olona any amin'ny helo satria tsy nahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny Filazantsara, ary nanantena an'i Kristy rahateo. Nahita ny voninahitr'Andriamanitra raharaha, ary te-hahita azy ireo izany.
Rehefa mahazo ny topimaso ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'i Kristy, Ho isika na oviana na oviana ho toy izany koa. Aoka àry ny mieritreritra momba ny dikan'ny hoe manampy ny olona hahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tontolo maizina, misy ny olona no tsy te-hahafantatra Azy.
Fantatr'i Paoly ny Apôstôly ahoana izany hoe manompo eo amin'ny olona izay nankahala azy sy ny Filazantsarany. Matetika isika no sary an-tsaina fa i Paoly no nipetraka teo amoron-dranomasina any ho any amin'ny tongony ny philosophizing araka izay nanoratra ireo taratasy ireo. No, Paoly mipetraka any amin'ny tontolo tena izy amin'ny tena zava-tsarotra - ny izao tontolo izao izay teo amin'ny fomba maro be dia be kokoa noho ny antsika sarotra. Ary ity taratasy ity voasoratra ao fa ny teny manodidina.
Paoly faharoa Korinto taratasiny ho an'ny fiangonana amin'ny fomba maro ny fiarovana sy ny famaritana ny asa fanompoany teo aza ny fanoherana. Miverena hiaraka amiko ho any 2 Corinthians 4:1-6.
Ary noho izany, manana izany fanompoana izany noho ny famindram-pon'Andriamanitra, tsy ketraka. 2 Fa efa nolavinay manala baraka, afenimpenina fomba. Izahay tsy mety manao hafetsena na ny hanova ny tenin'Andriamanitra, fa amin'ny misokatra fanambarana ny fahamarinana isika dia mampiseho ny tenantsika ho olona rehetra fieritreretan'ny eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra. 3 “Ary na dia ny filazantsaranay dia miafina, dia miafina amin'izay ho very. 4 Ao ny tranga ny andriamanitr'izao tontolo izao no manajamba ny sain'ny tsy mino, mba hiaro azy ireo tsy hahita ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, Izay endrik'Andriamanitra 'Andriamanitra. 5 Fa inona no manambara fa tsy ny tenantsika, fa Jesosy Kristy ho Tompo, miaraka izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesoa. 6 Fa Andriamanitra, izay nanao hoe:, "Aoka ny mazava hamirapiratra avy ao amin'ny haizina,"Mamirapiratra ao am-ponay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. (2 Corinthians 4:1-6)
Raha toa ianao misy mpino ao amin'ny Filazantsara, ianao efa nantsoina ho fanompoam-pivavahana ny Filazantsara. Noho izany dia te-hijery ny ohatr'i Paoly, ary te-hilaza ny lesona efatra ho amin'ny asa fanompoana ao amin'ny maizina izao tontolo izao
I. Aza Fanafoanana noho ny fandavana an'i Men (1-2)
Fandavana dia sarotra. Efa niaina daholo isika izany. Tena voajanahary ho an'ny olona mba ho kivy, ary naratra, na dia manatitra olona ny tenany na ny zavatra hafa sy ny olona nitodika azy teo. Avy amin'ny kilasy fahafito ny ankizivavy ny ankizilahy nangataka ny dihy, ny tsy fanaovana in izany oniversite no ampiharina amin'ny, ny tsy mahazo fa asa anareo fatratra te, fandavana Sarotra.
Ny Apôstôly Paoly nanao tamin'ny be ny fandavana sy ny fanoherana ny fanompoana ny Filazantsara. Maro tokoa ka maro ny taratasy dia ny voatery hiaro ny toetrany sy ny fomba ary ny hafatra. Ny sata dia tsy undisputed.
Azonao sary an-tsaina hoe ao amin'ny toerana Paoly? Ianao nankany Korinto, mpanompo sampy ity toerana mpanompo sampy, ary nitory ny filazantsara amin'ny olona any. Ianao tia azy ireo. Fa ankehitriny dia, naysayers sasany no nafafiny voan'ny fisalasalana ao an-tsainy. Ny ahiahy momba anao, ary ny antony manosika, sy ny fampianaranao. izay maharary.
Ahoana anefa no navalin'i Paoly? Jereo ny andininy 1.
“Ary noho izany, manana izany fanompoana izany noho ny famindram-pon'Andriamanitra, tsy ketraka.”
A. Aza kivy
Paoly milaza fa tsy kivy. Izy no nanao hoe: izy no tsy kivy na dia eo aza ny zava-misy fa ny niatrika fanoherana toy izany. Tsy azonay avy izy ketraka, ary nomena ny, ary hatsipy ao amin'ny lamba famaohana, na nahita zavatra hafa mba hanolotra ny ainy ho. Tsy misotro ronono izy ary nanapa-kevitra ny ho lasa ny ody fa tsy. Inona no mahagaga, mieritreritra izay fandavana izany dia tahaka ny. Raha jerena ny zava-drehetra i Paoly, dia nandeha namaky. Tsy ho naiditra am-ponja, notoraham-bato, nolavina. Mbola i Paoly no tsy kivy; izay mihitsy no mety halaim-panahy isika mba hanao.
Efa nizara ny filazantsara amin'ny olona iray, ary nanana azy ireo handa izany? manana aho. Afaka mieritreritra ny fotoana, rehefa nilaza fa ny olona tsy mila an'Andriamanitra, na nifamaly tamiko ary nilaza tamiko Andriamanitra tsy tena, na ny olona izay nanomboka manao hafahafa, ary tsy ahy rehefa nizara tamin'izy ireo, na dia ny olona izay mahery vaika Nivazavaza amin'ny ahy, ary nandrahona ahy. Nahoana ianao no alaim-panahy mamaly an 'izany? Mety halaim-panahy ianao Te hiady, nefa tsy afaka hiady. Maro amintsika no alaim-panahy ho kivy, ary manome ny. Iza no te-foana mihazakazaka an-biriky rindrina?
Ary rehefa namaky ny tenin'i Paoly hoe: tsy kivy. Gaga aho. Tiako ho fantatra ny fomba manao izy. Nahoana no tsy izy kivy? Milaza amintsika izy eto ao amin'io andininy io.
I Paoly no tsy ho ketraka noho ny halehiben 'ny asa fanompoana izay nomen'Andriamanitra Azy. Right talohan'izany ao amin'ny toko faha 3, Paoly mandany ny bunch ny fotoana manazava ny voninahitry ny Fanekem-pihavanana Vaovao fanompoana. Ary ny voninahitry ny maha-iray ireo tamin'ny lafiny iray amin'ny hazo fijaliana, izay mahazo ny hitory famonjena noho ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy.
Paoly nampahery dia avy amin'ny asa fanompoana ihany, tsy ahoana nahomby ny heviny na oviana na nanome fotoana. Ny feno fankasitrahana izy no voafidy izy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hanompo toy izany. Tsapany tombontsoa. Raha ny tena izy, tondroiny fa ny fifanekena vaovao io fanompoana be voninahitra kokoa noho ny fanekena taloha fanompoana an'i Mosesy. Ary Paoly no mahalala fa ny famindram-po, izay izy rehetra olona manana izany fanompoana izany. Ary ny lehilahy izay nankahala sy nanenjika ny fiangonana ny Kristianina.
Toy ny vahoakan 'Andriamanitra, ny fifaliana dia tsy mifototra amin'ny ny fomba ny olona, ​​rehefa mitory. Ny matoky ny Filazantsara dia tsy mifototra amin'ny ny fomba ny olona eo amin'ny manodidina mamaly azy. Izany dia midika hoe mifototra amin'ny voninahitry ny fiantsoana mihitsy.
Tena mampino fa ny olona ao amin'ny efitrano ity handray anjara amin'ny fanompoana be voninahitra kokoa noho ny fanompoana an'i Mosesy izy. Ve ianao hahatakatra fa? Satria tsy vitan'ny hoe mahita ny tsy mendrika, fa mahazo ny hilaza azy ireo ny momba an'Ilay tsy. Fantatsika tsara ange fa ny iray ihany no. Izahay vao mahazo ny hanampy ny olona hahita ny voninahitr'Andriamanitra tsy misarom-boaly! Izahay vao mahazo ny hitarika ny olona eo anatrehan 'Andriamanitra.
Kristianina, tokony tsy ketraka. Tsy midika izany hoe tsy tokony ho nalahelo mafy noho ny maizina ny izao tontolo izao. Izaho ihany no midika fa tsy tokony ho kivy, ary hanipy ao amin'ny lamba famaohana. Mety handa ny hafatra, fa izay tsy manao izany tsy misy be voninahitra.
Aza fisintahana. Aza kivy.
B. Hiala mahamenatra afenimpenina Fomba
“Fa efa nolavinay manala baraka, afenimpenina fomba.”
Paoly Mety ho voampanga ho maloto sy tena fikatsahana. Ny toetrany tonga ao an fanontaniana. Miaro ny tenany àry i Paoly, nanao hoe:, "Tsy misy, fa isika efa nolavinay. Izahay tsy manafina zavatra ary rehefa slimy amin'ny fomba miasa. "Tiany azy ireo hahafantatra fa manana fikasana ny miaina amin'ny fomba mendrika ny Filazantsara.
Izany feo be dia be toy izay nolazainy tamin'ny 2 Corinthians 2:17, "Tsy toy ny maro, tsy peddle ny tenin'Andriamanitra noho ny soa. Mifanohitra amin'izay aza, ao amin'i Kristy no itenenanay eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fahatsoram-po, tahaka ny olona nirahin'Andriamanitra.”
Mahatakatra fa ny Filazantsara i Paoly asa fanompoana dia mitaky antsika miaina ny fiainantsika amin'ny fomba iray. Ary raha tsy manao izany hampandefitra ny fanompoantsika. Fantany fa tsy afaka mitory ny Filazantsara, ka lazao ny olona mba hibebaka amin'ny fahotana, tsy miaina ny fiainany ny fibebahana ny tenantsika.
Jereo, raha ianao mizara ny filazantsara amin 'ny olona, fa ireo ihany ny olona mahita ny fiainanao dia mikorontana, ianao miasa manohitra ny Filazantsara. Mieritreritra izy ireo Filazantsara izany dia aza manao toy mahery vaika mitovy hoy izy fa, anton'ny misy mikorontana na dia iray mikorontana.
C. Aza mamita-na hanova ny Tenin'Andriamanitra
Hoy i Paoly avy eo, "Isika tsy mba manao hafetsena na ny hanova ny tenin'Andriamanitra." Na tahaka ny DIEM mametraka izany, "Tsy mampiasa fitaka, ary tsy isika no hanova ny tenin'Andriamanitra.”
hoy i Paoly, dia tsy mety ho fetsy na mikorontana ny Teny. Ary mbola miaro ny fomba miasa. Paoly dia tsy hanao na inona na inona izay tampers miaraka na fanovana na rano midina ny Tenin'Andriamanitra. Angamba toa ny zavatra hita, saingy tsy dia tena mivandravandra.
Iriko mpitory bebe kokoa amin'izao fotoana izao no manana izany tapa-kevitra, tsy mba manova ny Tenin'Andriamanitra. Misy be loatra fahadalana avy tao. Rehefa mieritreritra ianao momba izay fiangonana tokony ho anisan'ny, ho azo antoka ry zareo nitory ny Teny. Ho azo antoka ry zareo tsy nanampy na fanesorana avy aminy. Be loatra ny olona nanao anarana ho an'ny tenany ny nanova ny Tenin'Andriamanitra. Paoly hoe: dia tsy hanao izany.
Fantatro indraindray isika rehetra alaim-panahy hanao izany aza. Tsy voatery ho pasitera na mpitoriteny TV mba hanova ny Teny. Inona avy no sasany amin'ireo fomba mety halaim-panahy ianao mba hanova ny Filazantsara? Ny fanaovana izany toa hahafinaritra kokoa? Tsy miresaka momba ny fahotana? Mampanantena zavatra ny olona i Jesoa dia tsy mampanantena azy ireo?
Izany Karazana tahaka izao. Asa ianao raha efa nisy amin'ny fanasana na zavatra ary nipetraka teo amin'ny latabatra, ary maka sip ny iced dite ary izany unsweetened? Ianareo no tsy mankahala fa? Nahoana no unsweetened dite na dia misy ranomandry? Tsy misy olona tia izany. Ka inona no atao, ianao maka tahaka 18 siramamy fonosana ary miezaka ny hanao izany mamy, satria unsweetened dite dia zava-poana.
In Toy izany koa, ny olona hahita ny Filazantsara ho toy unpalatable, Tsy ampy ny olona mamy ny tsimon'ny tsiro. Dia hanampiny ho azy. Izy ireo izay manjo raha mbola tsy tanteraka hanary izany fa tsara. Fotsiny izy ireo te-afangaro amin'ny zavatra hafa miaraka aminy, mba ny olona tahaka azy bebe kokoa. Izao no zavatra mahatsiravina hanao! Ary mampiharihary ny fomba tena mahita ny Filazantsara.
Tsy mahatsapa fa ilaina ny hanova zavatra raha ny hevitrao izany tsininy, na tsy fahampian'ny. Ny ezaka mikorontana manodidina ny Tenin'Andriamanitra dia fanafihana Azy sy ny lalana fa mamonjy.
D. State Ny Fahamarinana Mazava ary aoka Mijoro Irery
“Fa ny misokatra fanambarana ny fahamarinana isika dia mampiseho ny tenantsika ho olona rehetra fieritreretan'ny eo imason'Andriamanitra 'Andriamanitra.”
Ny Filazantsara dia ampy. Panjakana ny fahamarinana tsotra sy miharihary. Tsy misy na iza na iza manao soa ho namitaka azy ho eo an milaza finoana. Manampy ny fahamarinana miteraka voaly; tsy hanala azy ireo. Raha misy vehivavy tsara tarehy izy, Nahoana no hosaronany efitra lamba? Tsy hanala baraka azy ho tian'ny; dia manafina ny tena hatsaran-tarehy. Aza miezaka ny hametraka mahaforona ny Filazantsara dia ho toy izany mahafatifaty. Aoka izany hamaha fa ny tena voninahitr'i Kristy dia hamiratra ny alalan '.
Na dia eo amin'ny fandavana, isika tsy tokony fisintahana. Tokony tsy ho velona amin'ny fomba izay manohitra ny hafatra, ary tsy tokony hanova ny hafatra mba miezaka ny olona tahaka azy. Tokony mazava tsara mitory ny Tenin'Andriamanitra, satria tiantsika izy ireo hahita ny voninahitry ny tena Andriamanitra.
Saingy tsy mora. Matetika dia toa tahaka fotsiny izy ireo tsy mahazo izany.
II. Mitandrema ianareo, fandrao ny Asa Satana
Mila mahafantatra ny fomba miasa i Satana. Maro ny hevi-diso momba azy. Ny olona sasany ho any amin'ny tafahoatra ny mieritreritra fa i Satana no ankapobeny mahery rehetra. Ny zava-drehetra mitranga dia vokatry ny heriny lehibe, ary afaka manao na inona na inona tiany raha tiany ny hanao izany. Ary misy ny sasany izay mankany amin'ny iray hafa tafahoatra. Izy ireo mino fa i Satana lainga na tsy misy na dia ny tsy manan-kery sy tsy nitory intsony. Roa ireo dia lainga tafahoatra ary izy ireo mampidi-doza ho antsika mba hino.
Ny marina dia i Satana no manana fahefana, ampy ny hery izay miasa tamin'i Paoly sy ny fanompoany. Henoy ny andininy telo sy efatra.
“Ary na dia ny filazantsaranay dia miafina, dia miafina amin'izay ho very. Ao ny tranga ny andriamanitr'izao tontolo izao no manajamba ny sain'ny tsy mino, mba hiaro azy ireo tsy hahita ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, Izay ny endrik 'Andriamanitra.”
A. Ny sasany tsy mahita ny Filazantsara
Toa fa ny iray amin'ireo fanakianana an'i Paoly fa efa nanafina ny hafatra avy amin'ny sasany, fa efa nitandrina ny olona sasany tsy hijery an'ilay izy. Paoly valin-dia, raha ny hafatra miafina amin'ny sasany, Izany dia midika hoe miafina avy izay very. Inona ny dikan'izany?
Paoly dia nanao hoe: ny olona izay tsy afaka mahita ny marina ny hafatra dia mitovy ny olona ho very. Izany no mazava ao 1 Corinthians 1:18 Hoy i Paoly rehefa, "Ny hafatra ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very…" Toa adala ho azy ireo. Misy olona sasany tsy any ho any amin'ny ara-panahy fahitana, izay velona noho ny finoana ny fampanantenan'Andriamanitra, iza no handova ny fiainana mandrakizay, izay mihevitra ny Filazantsara ihany koa no adala. Ireo olona tsy misy.
Dia hovaliako izay tsy mahalala an'Andriamanitra sy tsy manaiky ny filazantsaran'i Jesosy Tompontsika,. Izy ireo dia ho voasazy amin'ny fandringanana mandrakizay ka nakatony avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo sy ny fiandrianany ny heriny tamin'ny andro dia tonga mba hankalazaina eo amin'ny olony masina sy higagana eo amin'izay rehetra ao ireo izay efa mino. (2 Thessalonians 1:8-10ny)
Tsy ny lalao fa milalao. Ity ministera ity dia ny fiainana na ny fahafatesana asa fanompoana. Ireo izay mandà izany hafatry ny Filazantsara, mandà an'Andriamanitra. Ary ireo izay mandà Azy ho ringana sy ho voasazy mandrakizay.
B. Tsy mpino i Satana manajamba
Fa nahoana ireo olona ireo no tsy mahita? Izany no izay tonga i Satana amin'ny. Paoly miantso azy ny "Andriamanitr'izao tontolo izao." Noho izany, mazava fa manana ny fahefana, fa tsy ny hery rehetra. Izy no antsoina hoe ny andriamanitr'izao tontolo izao, na izao, ary ihany izao.
Ary araka ny efa fantatsika mankahala antsika i Satana. Soratra Masina milaza fa prowls manodidina ny tany izy mitady olona afaka handrapaka. Izy Andriamanitra ny fahavalo (tsy mitovy), ary ny anankiray izay nitondra antsika hino fa tsy lainga ny fahamarinana. Ka inona i Paoly hoe i Satana no eto? Nilaza i Paoly ireo olona ireo izay very, na araka ny miantso azy ireo, tsy mpino, tsy mahita, satria i Satana manajamba azy ireo.
Tokony ho porofo ny fomba mahagaga sy ny zava-dehibe ho antsika ny hahita ny voninahitr'Andriamanitra. Fa iray amin'ireo tanjona lehibe indrindra Satana dia ny hiaro antsika tsy hijery izany. Satana mandeha hatramin'ny ny jamba isika mba hahazoana antoka isika tsy mahazo mahita ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Filazantsara.
Inona ny voninahitra? Ny voninahitr'Andriamanitra dia ny lanjany, ny hatsaran-tarehiny, famirapiratana, voninahitra, lehibe, sy ny famirapiratana. Koa dia betsaka ny azo atao amin'ny ny laza, laza, ary eo anatrehan'ny olony.
Ny sasany amintsika mihevitra Satana tena tanjona dia ny haka fanahy antsika amin'ny piramida na ny maso an'ohatra ao amin'ny mpiangaly rap ny rakikira zavakanto. Jereo, Satana ny tena tanjona dia tsy ny namitaka anareo handeha ho any amin'ny Illuminati amin'ny raki-kira ny rap. Satana ny tena tanjona dia ny hiaro anao tsy nahita ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'i Kristy. Ary izay no tiantsika ny olona hahita. Miasa i Satana hamely anay. I Satana no fahavalo sy ny fahavalo ny ny foto-kevitr 'i Kristy.
Tsy tian'i Satana isika mba ho talanjona ny voninahitr'Andriamanitra. Tiany isika mba ho enamored ny voninahitra eto amin'ity tontolo ity. Tiany isika mba ho Miraikitra amin'ny bola, sy ny laza, ary tonga lafatra ny fifandraisana, sy ny fahombiazana. Tian'i Satana isika mba ho tena afa-po amin'ny vonjimaika, eto an-tany voninahitra, fa tsy manam-potoana mba mijery ny voninahitr'Andriamanitra. Nefa izany tsy ampy ho azy mba hahavariana antsika - dia tena mahajamba ny mason'ny antsika.
Efa no mamela an'i Satana mba jamba anao sy nahakivy anao tsy mijery ny voninahitr'Andriamanitra? No manenjika ny voninahitra eto amin'ity tontolo ity, fa tsy ny voninahitra avy amin'Andriamanitra? Raha izany, ianao no milalao eo an-tànany, ary manao tsara izay tiany hatao. Izany no mahatonga anay toy ny finoana an'i Jesosy, satria tiantsika ny olona hahita ny voninahitr'Andriamanitra, fa izy ireo matoky an'i Kristy, ary manome voninahitra an'Andriamanitra ny ainy, mitory ny Filazantsara.
Ny sasany amintsika manontany tena hoe nahoana ny izao tontolo izao maizina izany amin'izao fotoana izao. Nahoana ny olona no tena mpanota, feno fankahalana mankany amin'ny iray hafa, ary ny mankahala amin'Andriamanitra. Tsara Ity ny valiny. Ry zareo jamba. Angamba ianao efa nizara amin'ny namana na ny fianakaviana nandritra ny taona maro tsy misy fandrosoana sy reraka ianao. Toa azo. Tsy tokony hahazo kivy ka hiala amin'ny olona. Raha Andriamanitra dia afaka hamonjy anao, Dia afaka mamonjy na iza na iza! Raha afaka hamonjy ahy Andriamanitra, Dia afaka mamonjy na iza na iza. Izy ireo jamba, ary mila mahita. Ampio izy ireo hahita.
Izany koa dia mampiseho antsika fa ny olona, ​​rehefa mandà ny Filazantsara, tsy hoe ny hafatra dia diso intsony noho izany dia midika hoe ny jiro no diso raha misy jamba tsy mahita anao namirapiratra izany eo imasony. Ny olona jamba tsy mahita.
Aza avela hahatonga anao hisalasala fandavana ny Teny. Ny zava-misy fa ny olona jamba tsy mahita ny fomba tsara tarehy ny Mona Lisa dia, tsy midika fa tsy tsara tarehy. Tsy fototry ny heviny ny zavakanto ny olona izay tsy afaka mahita.
C. Jesosy no Image 'Andriamanitra
Hoy i Paoly i Satana manajamba azy ireo tsy hijery "Ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, Izay endrik'Andriamanitra 'Andriamanitra. " Izany no antony nitory an'i Kristy dia mampiseho ny olona ny voninahitr'Andriamanitra, satria i Jesoa Kristy no tena endrik'izany 'Andriamanitra.
Jesosy dia tsy hoe mpaminany 'Andriamanitra. Tsy fotsiny ny olona nirahin'Andriamanitra. Tsy fotsiny ny Zanak'Andriamanitra. Izy no tena endrik'izany 'Andriamanitra. Inona no dikan'ity? Midika izany fa i Jesosy, maha Andriamanitra, no tonga lafatra amin'ny fanehoana ny Ray. Raha te-hahafantatra izay ny fitiavan'Andriamanitra Toy, mijery an'i Jesosy. Ny famindram-po? Jereo i Jesosy. Ahoana no fiheveran'Andriamanitra ny mpanota? Jereo i Jesosy. Jesosy dia Andriamanitra manana endrika ara-batana, tonga lafatra sary.
Ao ny zavaboary hita maso no mahita ny asa, Fa ao amin'i Kristy Jesosy Andriamanitra mihitsy isika, Emmanuel, "Amintsika Andriamanitra." Ary ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy no nahafinaritra miharihary, satria ianao mahalala fa tsy irery ihany no Andriamanitra ny toetra any, fa Andriamanitra no. - Charles Spurgeon
Mbola tsy nisy nahita an'Andriamanitra, fa Andriamanitra ny Tokana, mitoetra eo amin'ny lafiny Ray, efa nanambara Azy. (John 1:18)
Koa raha ny olona mahita ny fahazavan'ny filazantsaran'ny voninahitr'i Kristy, dia hahita an'Andriamanitra ao amin'ny voninahiny. Tsy tian'i Satana azy ireo ny mahita fa.
Mitory ny Filazantsara isika mba olona afaka mahita ny voninahitra. Ary ny voninahiny dia hita ao Jesosy.
Ary i Satana no manajamba ny olona, inona no tokony atao? I Satana no "andriamanitr'izao tontolo izao." Inona no tokony hatao rehefa tonga hamely antsika ny?
III. Raiso ny Asa Minisitra
Ny iray amin'ireo antony maro amintsika no miady amin'ny fitoriana ny filazantsara dia satria diso fandray zavatra efa nantsoina hanao.
“Fa inona no manambara fa tsy ny tenantsika, fa Jesosy Kristy ho Tompo, miaraka izahay dia mpanomponareo noho ny amin'i Jesosy.”
Paoly dia nanao hoe:, ny olona mandà ny hafatra, satria izy ireo tsy afaka mahita an'i Kristy. Ary i Kristy no torinay. Izy ireo tsy mba mandà ahy, fa Izy.
A. mitory an'i Kristy!
Amin'ny maha-fanompoam-pivavahana ny Filazantsara, Kilonga iray manana asa. ambarao Kristy. Izahay revo amin'ny an, ary very hevitra, ary kivy, satria hiala amin'ny zava-dehibe indrindra. Lazao ny olona momba an'i Jesosy.
Raha tonga any hifandray amin'ny olona izay no very, tsy misy fanantenana, tsy misy Andriamanitra ary manontany ny tenanao ianao izay tokony hataonao. Lazao fa ny olona momba an'i Jesosy. Izany no ilainy. Eny izy ireo zavatra ilaina hafa. Fa ny tena mila dia i Jesosy.
Raha tena tianao ny olona hahita ny voninahitr'Andriamanitra, izany no izy, tsy tsara ny hitory zavatra hafa. Ary tsy midika fa tsy hanampy ny olona hiaina ny fiainany tsara, izany fotsiny hoe Kristy dia tsy maintsy ho eo afovoan'ny izay. Raha tsy i Jesoa no ilay fototra, ny antony manosika, ny solika ao ambadiky ny zavatra hafa rehetra no mitory, ny zavatra isika dia manao dia tsy haharitra.
Inona no dikan'ny hoe mitory an'i Kristy? Fantatsika avy amin'ny sisa amin'ny lahatsoratra sy ny hafa ao amin'ny Soratra Masina fa i Paoly no niresaka momba ny hafatry ny filazantsara. Hoy i Paoly tamin'ny Korintiana "aho tapa-kevitra ny hahafantatra na inona na inona eo aminareo, afa-tsy i Kristy ary Izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana." Paoly dia midika hoe ny hafatra momba an'i Jesosy sy ny zavatra nataony ary ny fomba mamonjy.
Raha toa ianao eto anio alina, ary tsy fantatrao fa ny hafatry ny filazantsara, dia izay tokony ho tanjonao eo anatrehanao miala. Figure hoe inona ny Filazantsara dia ary na na tsy mino izany. Any amin'ny fototry ny hafatry ny filazantsara ity, dia ny fahamarinana fa Andriamanitra dia masina, tena ny mpanota, Kristy dia tonga lafatra sy maty ho an'ny mpanota, ary nitsangana tamin 'ny maty. Ary ireo izay miala amin'ny fahotana sy matoky ao amin'i Kristy dia ho voavonjy. Izay no hafatra efa nantsoina hitory.
Tsy afaka mamonjy ny hafa. Tsy afaka ny ho faty ho an'ny olona. Tsy afaka manova na iza na iza ny fony. Afaka ihany no mitory an'i Kristy. Aza miezaka ny hamonjy azy ireo, lazao azy ireo ny momba ny Iray izay afaka. Aza miezaka ny hanova ny fo, lazao azy ireo ny momba ny Iray izay afaka. Aza miezaka ny fanadiovana azy, lazao azy ireo ny momba ny Iray izay afaka.
Nahoana ny Filazantsara? Satria izany no fomba nofidin'i Andriamanitra ny olona, rehefa mandre ny filazantsara. Ary ny mazava avy amin'io andalana io, fa ny voninahitr'Andriamanitra no mazava tsara hita ao amin'ny Vaovao Mahafaly * momba ny Zanany.
Vao tamin'ny herinandro lasa, Dia nahare roa fijoroana vavolombelona avy amin'ny mpino ao amin 'ny fiangonako. Ireo roa samy hafa be ny olona nanana tantara. Ny iray dia mpivarotra zava-mahadomelina izay nihidy ny. Iray hafa dia tsara ankizivavy, izay nankahala an'Andriamanitra. Samy efa ny Filazantsara dia nizara tamin'izy ireo im-betsaka. Ary izy ireo tsy nino izany. Ary fantatrareo ny zavatra farany nanosika azy ireo mba hatoky an'i Kristy? Nisy olona hafa nizara ny filazantsara amin 'ireo. Tsy fantatsika na oviana na oviana Andriamanitra, rehefa handeha hiasa, na ny fomba mandeha miasa. Fotsiny isika mila manao ny asany. Lazao ny olona momba an'i Jesosy, mba hahafahany mahita ny voninahitr'i Jesosy.
Fa ny fiadian'ny tafikay dia tsy avy amin'ny nofo, fa manana hery masina handrava fiarovana mafy. Mandringana hevitra izahay sy avo rehetra atsangana hanohitra hevitra ny fahalalana an'Andriamanitra, ary haka ny hevitra rehetra hankatò an'i Kristy ho babo tany, ho vonona ny hanasazy tsi-fanarahana rehetra, rehefa tanteraka ny fanarahanareo. (2 Corinthians 10:5-6)
Ny sasany amintsika te-hizara ny fijoroantsika ho vavolombelona, izay tsara. Fa raha ny Filazantsara dia tsy ankehitriny dia tsy manambara an'i Kristy, fa ny tena. "Izaho dia crackhead, dia tsy. "That's iray mahafinaritra tantara, Fa ahoana no ahafahako ho voavonjy?!! Na hoe na tsy, izany ny fitoriana ny tenanao. Isika dia manao ny tena zavatra Nilaza i Paoly dia tsy atao ao amin'io andalana io. Azafady no mizara ny fijoroanareo ho vavolombelona, fa lazao aminy ny Vaovao Mahafaly izay namonjy anao.
B. Aoka ianao ho mpanompon'ny ireo izay mila ny fahamarinana
Amin'ny fomba ahoana no efa mizara ny Filazantsara tato ho ato? Iza no efa nizara amin'ny? Inona no miresaka momba ny rehefa mipetraka eo amin'ny seza mpanety, na rehefa tonga ny volo atao? Inona no lazainao amin'ny mpiara-monina, na ny mpiara-miasa rehefa mahazo minitra vitsivitsy mba miresaka momba ny zavatra?
Dia ilay teny nadika toy ny mpanompo, ara-bakiteny dia midika hoe mpanompo. Izy no nanao hoe: Izaho dia manambara an'i Kristy ho Tompo, ary ahy ho toy ny mpanompo, noho ny amin'i Jesosy. Izany no mahavariana. Ary tsy ny hany fotoana i Paoly milaza zavatra toy izao.
Izaho no malalaka sy an'ny tsy misy olona, Dia mampiseho ny tenako fa mpanompon'ny olona rehetra, mba hahazoako maromaro araka izay azo atao. (1 Corinthians 9:19)
Manao ny tenanao ve ianao ny mpanompon'ny ireo izay mila mandre ny vaovao tsara?
Fa ny olona mba hihaino ny Filazantsara ahy, no tsy maintsy ho ny toe-javatra tonga lafatra? Manantena aho fa tsy. Te-ho iniana, ary na dia mety hanakana ny tenako fa olon-kafa no hahazo ny hihaona Kristy.
Ny sasany amintsika dia be atao loatra. Miasa be dia be izahay, na manompo any am-piangonana be dia be, ary tsy mbola mandany fotoana miaraka amin'ny tsy Kristianina. Tsapako toy izany indraindray. Fa tsy tokony handao ny miresaka momba an'i Kristy ny kisendrasendra. Tokony hanorina ny fiainantsika manodidina ny fitoriana ny filazantsara. Ho sorona mba hilaza ny olona hafa momba an'i Kristy.
Manontany tena aho hoe izay ao amin'ny efitrano ity dia mankany amin'ny tany hafa mba hitory ny vaovao tsara? Misy ny olona izay tsy mahafantatra. Misy ny olona izay jamba. Aiza ireo misiônera an-drenivohitra vonona ny handeha any an-kafa?
Izahay kosa mitory an'i Kristy, ny olona toy izany dia afaka mahita an'Andriamanitra. Fa inona no hevitra ny fitoriana an'i Kristy raha toa ka ny olona jamba?
IV. Fanantenana ao amin'ny asan'Andriamanitra
Raha toa ka izao tontolo izao ho Evanjely tsy tena miankina aminay, dia ara-bakiteny azo atao. Tsy afaka manokatra jamba maso. Rehetra azontsika atao dia ny hitory sy fitiavana azy. Andriamanitra no mangataka antsika hanao ny azo atao? Angamba.
ao amin'ny Asan'ny Apostoly 26:18, Hoy i Jesosy tamin'i Paoly, "Izaho naniraka anareo ho azy ireo, hampahiratra ny masony ka hialany amin'ny maizina ho amin'ny mazava, ary amin'ny fahefan'i Satana ho amin'Andriamanitra, mba hahazoany famelan-keloka sy lova eo amin'izay nohamasinina noho ny finoana Ahy. "
Ahoana no azo atao? Ny olona tsy afaka manao izany. Henoy ny andininy faha- 6.
“Fa Andriamanitra, izay nanao hoe:, "Aoka ny mazava hamirapiratra avy ao amin'ny haizina,"Mamirapiratra ao am-ponay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy.”
A. Andriamanitra nahary sy Recreates
Maka faharoa i Paoly mba hampahatsiahy antsika izay Andriamanitra. Te-hanome antsika haingana fampahatsiahivana ny lalana firaketana. Tsy Andriamanitra izay no miezaka ny hanao zavatra mahagaga ho an'ny fotoana voalohany. Tsy Andriamanitra izay teraka omaly na iray tapitrisa taona lasa izay. Tsy Andriamanitra izay noforonina. Tsy Andriamanitra izay tananareo dia mifamatotra amin'ny antsoina hoe andriamanitr'izao tontolo izao. Ny Andriamanitra isika dia handeha ho any olona amin'ny anaran'ny iray ihany no Andriamanitra izay nahary ny zavatra rehetra avy tanteraka na inona na inona.
Raha afaka mamorona ny zavaboary rehetra tamin'ny teny fotsiny, Afaka mitondra jamba, ny maty ho amin'ny fiainana.
Mason'ny jamba dia tsy lalao ho an'ny Andriamanitsika. Ratsy fanahy saina dia tsy lalao ho an'ny Andriamanitsika. Dark fo dia tsy misy lalao ho an'ny Andriamanitsika. Hoy izy, "Misia mazava" indray mandeha ka dia afaka milaza izany indray. Izay no hevitra i Paoly manao.
Ny sary dia mampiasa dia toy izao. Ny fo dia toy ny efitrano lehibe, izay dity mainty. Ny rindrina dia matevina. Tsy misy varavarankely. Tsy misy jiro. tsy misy jiro. Tsy misy varavarana ny mazava miditra eo ambany. Izany rehetra izany efitrano hatramin'izay fantatra dia tanteraka haizina. Fitoriana filazantsara dia rehefa misy olona mijoro ivelan'ny izany efitrano maizina sy kiakiaka Kristy no Tompo. Fa ny mazava mbola tsy tonga. Izy ireo handeha any am-pita sy ny Nikiakiaka, Maty noho ny ota, ary Izy efa nitsangana! Na izany aza tsy misy jiro. Ary avy eo ny fotoana iray hafa koa no nizara Vaovao, fa tamin'ity indray mitoraka ity ny handringana baolina ny famindram-pon'Andriamanitra smashes iray manontolo amin'ny alalan'ny iray amin'ireo rindrina sy ny hazavana mamiratra mihitsy ianao nahita mamirapiratra amin'ny alalan'ny. Izany indray mandeha efitrano maizina dia izao Mamiratra toy izay mety mandrakizay efitrano ho. Mitaky Andriamanitra ny hanao izany.
Christian, Raha efa nahita ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny tavan'i Jesosy, Raha efa niala tamin'ny maizina ho amin'ny mazava, dia tsy ny fanaovana. Izany dia midika hoe tsy farany ny fanaovana ny olona izay nizara aminao. Izany ny fanaovana. Andriamanitra irery ihany no afaka manao izany. Raha ny andriamanitr'izao tontolo izao manajamba antsika amin'ny voninahitr'i Jesosy, ny marina sy velona mamirapiratra mazava ho any amin'ny fo sy Manokatra jamba maso. Ary Izy mampiasa ny Teniny mba hanao izany.
Raha toa ka ny fony intsony maizina ahoana izay mampiseho ny eo amin'ny fiainanao?
C. Nijery an'i Jesosy tsy tapaka amim-pankasitrahana
Ve ianao hahatakatra izay nataon'Andriamanitra ho anao? Maro amintsika, anisan'izany ny tenako, Tsy liana momba ny fitoriana ny filazantsara ampy, satria tsy velom-pankasitrahana izahay ampy fa mahazo ny hijery ny voninahitr'Andriamanitra ao amin'ny Filazantsara. Raha bebe kokoa izahay voasambotra, ary Variana be amin'Andriamanitsika sy izay ananantsika ao amin'i Kristy, izahay hilaza ny olona hafa bebe kokoa. Lazao aminy isika momba ny mampiseho tiantsika, ary tsara Albums, sy ny fihaonambe. Ve isika lazao aminy momba an'i Jesosy? Rehefa tia zavatra, dia tsy afaka ny tsy hizara azy io amin'ny hafa.
Christian, manararaotra ny zavatra nataon'Andriamanitra. Manapotsitra ny tenanao amin'izany Filazantsara, fa Andriamanitra dia mbola mampiseho ny voninahiny eny misy, ao amin'ny tavan'i Kristy. Tsy mitsahatra rehefa matoky Azy. Aza mitady hifindra lasa ny Filazantsara! Izany izay mahita ny voninahitr'Andriamanitra mazava indrindra. Izany no rehetra ao amin'ny Soratra Masina dia manondro antsika.
Ahoana no Andriamanitra lavished ny fitiavany antsika. Andriamanitra nararany ny haren'ny fahasoavany eo amintsika. Andriamanitra nampiseho faharetana aminay. Andriamanitra dia maneho ny tenany eny. Jamba sady teo imasony no naverina tamin'ny laoniny dia tsy mandeha manodidina amin'ny blindfolds. Manana maso. Noho izany mijery.
Raha kivy ianao, tsarovy iza ianao manompo. Tandremo ny fitoriana ny Filazantsara. Izahay kosa mitory an'i Kristy ny olona mba afaka mahita voninahitra.
Fanompoana eto amin'ity tontolo maizina lavo Tsy mbola, ary tsy ho mora. Fa azontsika ianarana avy Paul. Afaka mianatra, voalohany, Tsy ny fisintahana noho ny fandavana ny olona. faharoa, mba tandremo ny asan'ny Satana. fahatelo, ny manaiky ny asan'ny minisitra. fahefatra, ny hanantena ny asan'Andriamanitra.
Inona no ataoko raha toa aho tsy nitory ny Filazantsara toy na ahoana tokony ho? Tsy tiako ianareo mba hiala aminy izy kivy. Jereo an'i Kristy. Tiako ianao hiala eto nampirisika, amin'ny izay efa nataony ho anareo tany i Jesosy. Ary nandrisika ny hilaza ny hafa mba hahafahan'izy ireo mahatsapa ny toy izany koa.
Misy be loatra any tsatòka ho antsika ny mandeha manodidina ny mahatsiaro ratsy ho an'ny tenantsika. Be loatra ny amin'ny tsato-kazo.
Misy safidy roa ihany no ho antsika rehefa tapitra ity fiainana ity. Ireo amintsika izay tsy nanao ny finoana an'i Kristy, ho levona. Raha toa ka tsy hanova ny saina momba ny fahotana, Avelao, dia hanipy ny tenantsika eo amin'ny famindram-po 'i Jesoa, Ho hiaritra isika fandringanana mandrakizay.
Fa raha mihodina ary matoky ao amin'i Kristy, dia mahazo mahita ny topimaso ny voninahiny izao ao amin'ny Filazantsaran'i Kristy. ary taty aoriana, rehefa hiverina Izy, isika rehetra dia hahazo vatana vaovao. Ary isika dia hijery ny voninahiny manontolo, mandrakizay. Izany no be voninahitra. Misy be dia be amin'ny tsato-kazo. Tandremo nitory ny Filazantsara ny olona toy izany dia afaka mahita ny voninahitra mandrakizay.
Jared Duba • Aogositra 22, 2013 amin'ny 1:55 PM • navalin'i
Aho tao Legacy ka nandre anao mitory izany hafatra. Tena nankasitrahako ny fanindriana ny Fitoriana Filazantsara sy nahazo toky fa maro ry namana no hita ho azy. Nisy ihany koa ny mandresy lahatra sy fampandrosoana ny fanahiko manokana. Misaotra, Rahalahy!
Jay • Aogositra 22, 2013 amin'ny 8:35 PM • navalin'i
Tsarovy ny tsy manan-kialofana ny Kristianina efa nolazaiko anareo ry zalahy momba ny? Mila fanampiana izy ireo.. Izay mety ho fanampiana ho lehibe ry zalahy. Andriamanitra no hahita fa i Jesosy na dia tsy afaka manao asa izay tsy nisy finoana. Ny olona rehetra tao LA dia mivily ny lamosiny noho ny tsy ampy finoana. Ndeha manohana ny fanjakana sy hanome izay azontsika atao. Izy ireo ihany koa ny manao mozika sy ny Fanahy tena miresaka ny tononkira. Ndeha niely fa koa! Manao izany isika ho amin'ny fanjakana y'all. Email livin4christ4lyfe@gmail.com .. Ndeha hanampy ny rahalahy. Tia anareo rehetra. ary Trip, mba ampio.. Raha te-hahita ny vokatra.. Jereo YouTube.com/livin4christ4lyfe ..
PJMadsen • Aogositra 23, 2013 amin'ny 4:43 aho • navalin'i
Wow! Izany no tena tsara! Tsy afaka miandry ny mizara izany amin'ny namako! Misaotra anao! Tena toy fa afaka mandre sy mahita izany amin'ny YouTube…ary ihany koa ny mamaky ny toriteny toy ny milaza izany Trip Lee teo ambanin'ny lahatsary! “Andriamanitra anie hitahy antsika rehetra.”
miresaka momba: Oh U preachin' ankehitriny? @ TripLee116 mitondra ny teny ny vahoaka ... - UrbanGospelEntertainment.com @UrbanGospelENT
Shauneil • Aogositra 23, 2013 amin'ny 8:22 PM • navalin'i
Excellent hafatra. Tsara voasoratra ary ny famaritana dia tsotra. Aiza ny famandrihana bokotra? Tsy te-hanana ny horonan-taratasy ny alalan 'ny pejy rehetra mba hahita ny lahatsoratra. :-) Aho, mety tsy ho nahavita izany.
SdoubleU • Aogositra 24, 2013 amin'ny 6:14 PM • navalin'i
Misaotra noho izany hafatra. Izany no zavatra tena ilaina mba hihaino. Ity tranonkala no fampaherezana lehibe ho ahy. TAHIN'ANDRIAMANITRA!
Amarie • Aogositra 25, 2013 amin'ny 9:02 aho • navalin'i
I looooooooooooove unsweetened iced dite! ;-)
DJ • Septambra 11, 2013 amin'ny 6:43 PM • navalin'i
I, Trip! Thanks Dude! Ny hafatra tena indray-ara-tsindrimandry aho. Efa toy izany aho tato ho ato kivy ary izany vao nanampy.
Nitsirika kely toeram-ponenana • Jolay 23, 2019 amin'ny 7:07 aho • navalin'i
Dia ho tia ny efa nihazona azy amin'ny masoandro.